Na Teo Aza Ny Fanafahana ireo Mpanao Gazetin’ny Reuters, Mbola Tataovan-doza Hatrany Ny Fahafahana Maneho Hevitra Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2019 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Ελληνικά, Español, Yorùbá, English
Mpanao Gazety Reuters, Wa Lone sy Kyaw Soe Oo, afaka tao amin'ny fonjan'i Insein ao Yangon. Sary sy maribolana an'i Myo Min Soe / Mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices ny Irrawaddy.
Ireo vondrona media sy ireo mpiaro ny zon'olombelona dia samy mankalaza ny fanafahana an'ireo mpanao gazetyin'ny masoivoho Reuters, Wa Lone sy Kyaw Soe Oo, izay nandany ny androany tany ampitazonana efa ho maherin'ny 500 andro nohon'ny nandraisany anjara taminà fanadihadiana mikasika ny famonoana ny teratany Rohingya tao avaratr'i Myanmar. Na teo aza ny fanafahana azy ireo, ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena dia mbola voatohintohina hatrany noho ny fitohizan'ny fitazonana sy ny fanenjehana an'ireo artista, ireo mpanao gazety ary ireo mpikatroka sasantsasany. Ndeha ho dinihintsika ireto tranga manaraka ireto:
Raharaha fanalàm-baraka anenjehana Ny Irrawaddy
Misy fitoriana iray noho ny resaka fanalàm-baraka napetraky ny Fibaikoam-paritra ara-miaramila aoYangon anenjehana an'i U Ye Ni, tonian-dahatsoratry ny Irrawaddy amin'ny teny Birmana, vokatry ny fandrakofana tombanana ho tsy ara-drariny nataon'ny tranonkala filazambaovaony an'ireo fifandonana mitàm-piadiana nisy teo amin'ireo tafiky ny fitondrana sy ny tafika mpikomy Arakan ao amin'ny Fanjakana Rakhine. Nanambara ny Irrawaddy fa tsy nanao afa-tsy nitatitra mikasika ny firongatr'ireo fifandonana mitam-piadiana tao amin'ny faritra izy hatramin'ny fiandohan'ny taona 2019. Toy izao ny valintenin‘i U Ye Ni amin'ilay fitoriana napetraky ny tafika:
Miala tsiny indrindra aho amin'ny fahadisoan-kevitry ny tafika momba anay. Fitsipika apetraky ny asa fanaovangazety ny mba hilazànay ny fangirifirian'ireo olona any anatin'ny faritra iray misy fifandonana. Ny tanjonay ao ambadiky ny fandrakofana dia ny hanosika an'ireo olona voakasika amin'izany mba hamaha ireo olana amin'ny alalan'ny fahatsapana ny hirifirin'ny vahoaka.
Mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices ny Irrawaddy
Nofonjaina noho ny fanarabiana
Nandritra izany fotoana izany, mpikambana dimy tamin'ny tarika Peacock Generation Thangyat no nalefa tany amin'ny fonjan'i Isein miandry fitsaràna noho ny fampisehoana nataon-dry zareo nanarabiraby tamim-panesoana ny tafika. Ny Thangyat dia seho kanto iray mitovitovy amin'ny tononkalo slam ahitàna an'ireo andinin-tononkalo zafindraony, ampiarahina amin'ireo naotina mozika mahazatra sady afangaro aminà hira, dihy ary hogahoga. Nampangaina ho nandika ny andinin-dalàna faha 505 (a) mifehy ny heloka bevava ilay tarika, izay melohina ho nanaparitaka fanambaràna, tsaho na tatitra miarka amin'ny tanjona hisarihana ireo manamboninahitra rehetra ao amin'ny tafika mba tsy hanaja ireo andraikiny na tsy hanatotosa izany.
Hoy i Zeyar Lwin, iray tamin'ireo voampanga:
Olana politika avokoa ireo tranga mahazo anay, tsy maintsy politika no hamahàna azy ireo. Ary koa, te-hilaza aho hoe ilaintsika rehetra ny mandray anjara amin'ny asa mba hahatontosa ny fanavaozana ao amin'ny parlemanta ilay lalàm-panorenana tamin'ny 2008. Araka ny hevitro, tokony ho voavaha avokoa ireo olana ireo raha toa isika afaka manatanteraka ny asa savaranonando ho fanitsiana ny lalàm-panorenana.
Nalain'i Zeyar Lwin ho ohatra ny lalàm-panorenana 2008, izay, araka ny inoan'ireo mpanao fanadihadiana marobe, dia narafitra hanamafisana ny fifehezan'ny tafika na dia aorian'ny famerenana ny fitantanana sivily aza.
Mpamokatra sarimehtsika, tsy salama any am-pigadràna
Ny trangan-javatra mahazo ilay mpamokatra sarimihetsika, Min Htin Ko Ko Gyi, ihany koa dia mampiseho ireo tsindry mampidi-doza atao amin'ireo artista. Ny fitoriana iray napetraky ny manamboninahitra iray ao amin'ny tafika hanenjehana an'ireo lahatsoratra “fanalàm-baraka” nalefan'ilay mpamokatra sarimihetsika teo amin'ny Facebook no nitarika ny fisamborana azy. Min Htin Ko Ko Gyi no mpamorona ny Fetiben'ny Sarimihetsika mikasika ny zon'olombelona sy ny hasina maha-olona ao Myanmar, ary fantatry ny maro amin'ny fitsikerany ny fandraisana anjaran'ny tafika amin'ny fiainana ara-politika. Angatahan’ireo mpanohana azy ny fanafahana azy noho ireo antony maha-olombelona, satria noho ny aretina homamiadana dia efa nalàna antsasaky ny atiny ary ianjadian'ireo olan'ny fo sy aretin'ny voa izy. Ny Tambajoran'ny Sarimihetsika momba ny Zon'Olombelona, mpiara-miasa amin'ireo fetiben'ny sarimihetsika momba ny zon'olombelona miisa 40 erantany, dia nandefa ity taratasy ity ho an'ny governemanta:
Amin'ny maha vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena miasa loha amin'ny resaka zon'olombelona anay, mangataka ny governemanta ao Myanmar izahay mba hiantoka ny tsy fampiasàna ny Section66(d), izay natao hanatsaràna ny fandrosoan'ny fifandraisandavitra, mba ho ampiasaina hanampenam-bava an'ireo sivily ao Myanmar maniry haneho ny heviny sy handray anjara amin'ny zotra demokratika ao Myanmar.
Ilay lalàna Section 66(d) nahabe adihevitra mikasika ny fanalàm-baraka no resahan'ilay taratasy, lalàna izay nampiasain‘ireo tomponandraikitra mba hiampangana an'ireo mpitsikera, ireo mpikatroka ary ireo mpanao gazety.
Nolavinan'ny fitsarana teo an-toerana ny fangatahana fanafahana amin'ny fandoavana onitra nataon'i Min Htin Ko Ko Gyi. Voalahatra ho amin'ny 9 may 2019 ny fitsarana azy manaraka.
“Volalohany indrindra, tsy tokony nofonjaina mihitsy izy ireo”
Voaheloka fito taona an-tranomaizina i Wa Lone sy Kyaw Soe Oo noho ny fanimbazimbana ny Official Secrets Act efa lalàna fony vanimpotoanan'ny fanjanahantany. Ny volana Aprily lsa teo, nohamafisin'ny Fitsarana Avo ny fanamelohana azy ireo, nefa nohafahana izy ireo taorian'ny nanomezana azy ireo ny famotsoran-keloka avy amin'ny Filohampirenena nandritra ny fety Taombaovao nentindrazana.
Niarahaba ny fanotsorana an'i Wa Lone sy Kyaw Soe Oo ireo vondrona toy ny Southeast Asian Press Alliance (Vovonana iarahan'ireo mpanao gazety ao Azia Atsmo Atsinanana), saingy natsipihan’izy ireo ihany koa ny tsy rariny natao tamin'ireo mpanao gazety roa ireo.
Voalohany indrindra, tsy tokony nofonjaina mihitsy izy ireo satria tsy nisy heloka nataony.
Na dia niarahaba an'ity fivoaran-draharaha ho ain'ny tsara ity aza izahay, ny tranga mikasika an'i Wa Lone sy Kyaw Soe Oo no porofo fa noho ny faniriana hifikitra eo amin'ny fahefana dia mbola eo ambanin'ireo tsindry politika tsy miato ireo mpanao gazety
Japana 5 ora izay